Isbeddellada hadda jira ee qaabeynta qaabeynta | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Astaamaha, Sawirro, Khayraadka
Waxaa la yiri naqshadeynta garaafka xiriir dhow la leh tikniyoolajiyadda, Taasi waa sababta xirfadleyda arimahan waa inay si dhakhso leh ula qabsadaan baahida isticmaalaha, isbeddellada iyo dhadhanka.
Maqaalkan waxaan ku arki doonnaa qaar ka mid ah isbeddellada hadda socda ee ku jira naqshadeynta garaafka, haddaba fiiro gaar ah u yeelo.
1 Lix isbeddellada hadda jira ee qaabeynta garaafka
1.1 Sawirro ku baahsan shaashadda oo dhan
2 Noocyada noocyada kala duwan
2.1 U wac badhamada tallaabada
2.2 Nashaad iyo guuritaan
2.3 Naqshadeynta loo isticmaalo aaladaha mobilada
2.4 Sawirada SVG
3 Tusaale ahaan, waxay noqon doontaa wax caadi ah in la fiirsado
3.1 Codsiyada Shabakada Horusocod
3.2 Naqshadaha qalfoofka
Lix isbeddellada hadda jira ee qaabeynta garaafka
Sawirro ku baahsan shaashadda oo dhan
Saameyntiisa sare awgeed, waxay yihiin ku habboon helitaanka dareenkaAma in laga tago farriin, si loo shaaciyo astaan, si loo soo dhoweeyo websaydh, dhammaantood iyada oo loo marayo sawir noqon kara mid aad u fudud ama aad u buuxa faahfaahinta; in haa fiiqitaanka ama qeexitaanka tan ay aad muhiim u tahay.
Noocyada noocyada kala duwan
para dheellitirnaanta fududaanta ka jirta naqshadaha muuqaalka maanta guud ahaan waana in adeegsiga qaab qoriddu ay qaaddo marxaladda dhexe, taas oo ah sababta xulashada saxda ah ee isku mid ah ay muhiim u tahay, taas oo ay tahay in ay garaacdo ku filan si ujeeddada loo gaaro. Waxay noqon kartaa inaad farriin siiso ama adeegsadaha uu si toos ah ugu tago badhannada wicitaanka, oo aan ka hadli doonno marka xigta.
U wac badhamada tallaabada
Kuwani waxay aad ula socdaan gacanta naqshado lagu sameeyay sawirro shaashad buuxda ah, oo ku habboon isbeddelka ugu yar, iyagu waa kuwo qurux badan isla mar ahaantaana wax garanaya isla markaana ku guuleysanaya ujeeddada, taas oo ah in isticmaalaha uu iyaga ku garaaco oo uu helo macluumaad dheeri ah.
Nashaad iyo guuritaan
Waxay yihiin a habka asalka ah ee loola macaamilo websaydhkaWaxaa muhiim ah in aan lagu dhergin kuwan, liddi ku ah, in la istaraatiijiyad yeesho marka la adeegsanayo si natiijada ka soo baxda ay u noqoto mid la filayo, saameyn oo ay ka farxiso kuwa iyaga fiiriya.
Naqshadeynta loo isticmaalo aaladaha mobilada
Aaladaha casriga ee mobilada ayaa isu rogay aalad shaqo, ajende shaqsiyadeed, xiriir iyo lama huraan u ah maalinba maalinta ka dambaysa kuwa leh; Sidaa awgeed, la qabsashada qalabkan si ay u taageeraan daalacashada bogagga internetka ayaa horseeday naqshadaynta iyo la qabsashada bogaggan inay iswaafajiyaan waana la heli karaa adeegsadaha meel kasta oo uu joogo.
Waxaa jira shirkado gaar ah oo leh noocyo boggooda internetka ah oo si gaar ah loogu talagalay qalabka moobiilka.
Waxaa loola jeedaa soosaarida sawirada qaab dijitaal ah Laga bilaabo jaantusyada joomatari ee kala duwan oo madaxbannaan, maadaama ay ka duwan yihiin kuwa shaxanka ka kooban pixels, waxay u oggolaanayaan sawirrada in la weyneeyo iyada oo aan luminin tayadooda ama xaraaradooda, waana sababta loogu adeegsaday maanta iyo gaar ahaan astaamaha bogagga internetka. iyo sawirro aad u fudud oo ku yaal bogagga guriga.
Kuwa kale isbeddellada 2017 Waxay yiraahdeen naqshadeynta garaafka ayaa ficil ahaan u gaar ah in lagu hagaajiyo laguna dhex wareego aaladaha mobilada, iyadoo la ogyahay in tirada dadka isticmaala bogagga internetka ay inta badan ka sameeyaan moobiilladooda.
Waan arki doonaa markaa, la qabsashada goobaha jira iyo naqshado cusub oo lagu bar tilmaameedsanayo dadka isticmaala aaladda moobaylka.
Tusaale ahaan, waxay noqon doontaa wax caadi ah in la fiirsado
Codsiyada Shabakada Horusocod
Waxay ka soo horjeedaan waxa aan maanta u naqaano codsiyada iyo kuwan ka muuqan App Store iyo Play Store iyo inay waajib tahay inaan kala soo baxno si aan ugu adeegsan karno telefoonnada gacanta, farqiga aasaasiga ahi waa taas waxaan ka faa'iideysan karnaa PWA-yadaas si toos ah uga socota biraawsarka adigoon soo dejisanayn.
Waxaa sidoo kale laga heli karaa shaashadda guriga iyo desktop-ka.
Naqshadaha shabakadda iyo wixii ka dambeeya, waxaa loo horumarin doonaa sidii ay ahaayeen codsiyo sidaas darteedna, naqshadeeyayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa codsan doona in laga sameeyo dukaamada alaab codsi.
Si ka duwan sida Spinners, habka loo raro bogagga shabakadda ee qalfoofka hadda, waxaa loola jeedaa raritaanka qaybo, ka socda kan ugu fudud uguna caansan qaybaha ugu murugsan, laakiin had iyo jeer leh asalka ama qalfoofka shaashadda aad ku dul socoto. Waad ku mahadsan tahay tan, isticmaaleha marka uu daawanayo meeleeyaha waxaad filan kartaa kuwa iman doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Isbeddellada hadda jira ee qaabeynta garaafka